मधेश आन्दोलनका सामन्ती युवा | जुज्दाइका २ पैसे विचारहरुको सँगालो
मधेश आन्दोलनका सामन्ती युवा
Posted on December 20, 2015 by jujumaan
नेपालका कुनै नेताले पनि जनताका लागि केही गर्छ भनेर सोच्नु बेकार छ। पहाडे होस् या मधेशी, कुरा उही हो। धन्न, पहाडमा त बानी परिसक्यो – नेता आउँछ, बडेबडे कुरा गर्छ, जान्छ। जनताले भोट हाल्छन नै, भेडा जो हुन। तर आश गर्ने बानी तब मर्‍यो जब १७००० मरे। यो भन्दा अघि नि आश खासै रहेको त हैन, तर ‘तिम्रो ज्यान देऊ, बदलामा समाजलाई अधिकार दिन्छौँ’ को बासी नारा पहाडले पचाइसक्यो। तराइमा यो आइटम नयैँ रहेछ। विडम्बना। थप विडम्वना चैँ यस्ता नारा फैलाउन मधेशी युवा नै बढी लागिपरेका छन। थाहा नभएर हो या भित्री एजेण्डा अर्कै भएर हो, सामाजिक सञ्जालमा मधेशी नेता र नाराको बारेमा अधिकांश मधेशी युवाले प्रतिप्रश्न गरेको वा क्रिटिकल्ली सोचेको देखिन्न। नेताले जे छाद्छ, त्यो चाट्ने परम्परा पहाडमा उहिलेदेखि थियो, अझै छ। तराइतिर नहोस् कि भनेको, बानी सरिसकेछ। सामन्तीको भएभरको खराब बानी सरेपछि त्यो मान्छे चैँ सामन्ती बन्छ कि बन्दैन?
यसो हेर्छु टुइटरमा, देख्छु:
मधेश आन्दोलन सफल पारौँ
यो हक र अधिकारको लडाइँ हो
केन्द्रीय राज्यसत्ता ढाल्नै पर्छ
राजधानी केन्द्रित पुरातनवादी शक्तिको अवसान हुनै पर्छ
ज्यान जाओस्, तर यो सत्यको लडाइँबाट पछि हट्न हुन्न
देखाउनु पर्छ नेपाललाई, मधेशको शक्ति कति छ
यस्ता नारा धेरै अंग्रेजीमा अनि त्यसपछि नेपालीमा लगाएको देख्छु।
र लाग्छ, मधेशमा अंग्रेजी बोल्ने र बुझ्ने धेरै भएरै त होला, ‘आफ्नो’ भनिएको हिन्दि भाषा पनि प्रयोग गर्दैनन्। गर्न हिच्किचाहट छ कि भन्ने ठान्दछु।
र यसरी नाराबाजी गर्नेमा धेरै युवाहरु छन। खुशी लाग्छ, शायद मेरै उमेर हाराहारीका युवाहरुले हकहितका लागि आवाज उठाएको देख्दा। अनि दु:ख पनि लाग्छ, यिनीहरुको परिश्रम गलत ठाउँमा गएको देख्दा।
तर थप खुशी तब जाग्छ, जब यी मधेशी युवाहरुको जमातसँग पहाडे र हिमाली युवाहरुको कुरा मिल्छ। यानेकि, ‘मधेश आन्दोलन सफल पारौँ’ भन्ने बोलीमा लोली मिसाउने मजस्तै पहाडे युवाहरु पनि टन्नै छन सामाजिक सञ्जालमा।
अनि सोच्छु, यिनले फेसबुकमा, टुइटरमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न त गर्छन, तर कहाँबाट गर्छन? पक्कै घरबाट होला। बीच बाटोबाट, युद्धको मैदानबाट त पक्कै नहोला। घरमा बसेपछि अरु केही नभए पनि हावा हुरी पानी र उस्तै पर्दा बन्दुकका गोली पनि कमै बाधा पुर्‍याउलान। मतलब, तल तराइमा जो २०-२२ जना नाकामा बसेर हुण्डरी मच्चाइरहेछन, तिनीहरुको औकातका त यी रहेनछन, सामाजिक सञ्जालमा हुनेहरु। अलि माथिल्ला तहका होलान।
देखेको छु, धेरैले सोधेको पनि: यता तपाईँहरु धडाधड टुइट बर्साउने, उता आन्दोलनकारीको ढाडमा पुलिसले लाठी बर्साउने। किन होला यस्तो गर्नुभको?
उत्तर प्राय यस्तो आउँछ: बौद्धिक वर्ग पनि त चाहियो आन्दोलनलाई दिशा दिने। सबै मैदानमा लडेर यता चेतना कसले फैलाउने?
अनि घोरिन्छु: सडकमा ज्यानको आहुति दिने एउटा वर्ग रहेछ। स्क्रीनमा टुइटको आहुति दिने अर्को। घर या अफिसको आरामदायी चौघेरामा बसेर कुनै तल्लो वर्ग शोषित भएको टुलुटुलु हेर्नुलाई सामन्ती पारा भन्न मिल्ला?
किनभने, अहिले पहाडी जमातलाई यही आरोप (अरु धेरैमध्ये) त लगाइएको छ नि: पहाड सामन्ती भएकैले मधेशको आन्दोलनलाई सहयोग गरेन।
अफिस भनिहालियो माथि, अफिसकै कुरा गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (NGO) मा काम गर्ने धेरै मधेशी साथीहरु टुइटरमा हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहै छ। सरकारी सेवामा पनि टन्नै हुनुहुन्छ। अनि कसले हो, सरकारी सेवामा मधेशकै प्रतिनिधित्व धेरै भएको भन्ने ग्राफ पनि देखाएका थिए अचेलजसो। यी महानुभावहरुले पनि हेपियौँ, पिल्सियौँ भनेको के होला? जागिर र सुविधा त बराबरै होला अरुलाई दिए जसरी। कैयन ‘सामन्ती’ खरदार, सुब्बा, पियन पहाडे भन्दा माथिल्लै पोस्ट पनि होला। बरा अझ के पुगेन होला जस्तो लाग्छ के असन्तोकी मनहरुलाई। अनि, तल तराइमा ज्यान फाल्ने, हातगोडा धुलोपिठो हुने, आँखा-कान फुट्ने आदि लाई यी पद र यस्तै प्रतिष्ठित पदहरु मिलाउनकै लागि यो आन्दोलन हो अरे। त्यसो हो भने के आन्दोलन सकेको भोलिपल्टै पद दिनुहुन्छ त? दिनुहुन्न नि। आफैँ पढेर, जानेर, बुझेर, संघर्ष गरेर पद पाउनु भएको हुनुपर्छ मधेशी साथीहरुले, र अरुले पनि यसैगरी आउनुपर्छ भन्नुहुनेछ भन्नेमा मलाई शंकै छैन। तर कुरा कहाँ मिल्दैन भने नि, त्यो ‘पढेर, जानेर, बुझेर, संघर्ष गरेर’ आउने प्रकृयाको लागि स्कूल, क्याम्पस चल्नु पर्दैन? आफूले पढिसकियो भनेर हो कि कुन्नि, अब बालै भएन भन्नुभको? हैन होला भन्ने कामना गर्दछु।
हो भने साना नानी पढ्ने स्कूल र मधेशको भावी उर्जा – त्यहाँको युवापुस्ता – पढ्ने कलेज बन्द गराउने तपाईँहरु र तपाईँका शब्दहरु कति विषालु? सोच्नुहोला। पहाडे सामन्तीले शोषेको भन्दा पनि चर्को निस्कनुभो यार, सोच्नु त। बरु तपाइँहरुको कट्टर दुश्मन महेन्द्र राजाले पनि यस्तो ढुंगेयुगवादी कदम चालेको थिएन।
सबैभन्दा ताज्जुब लागेको कुरा चैँ अरुले आफ्नो कुरा मन पराएन भने या त झुण्ड मिलेर आक्रमण गर्ने, वा ब्लक ठोक्ने। हो, म नि ठोक्छु ब्लक, कुरा सुन्ने नसकिने भएपछि। त्यसमाथि म त कथित सामन्ती परिहालेँ। ठोक्ने नै भएँ। तर जब मधेश आन्दोलनमा लागेका, आफ्नो कुरा पूरै देशले सुनोस् भन्ने इच्छा भएका, सबैको आँखा खोल्न उद्दत युवाहरुको जमात अल्ट्रा-सामन्ती हर्कतमा उत्रन्छ, अनि लाग्छ, स्याला सामन्ती बन्न त मधेशी बोरोहरुको पो सिको गर्नुपर्ने हछ!
त्यसैले सामन्ती मधेशी बोरोज, वेलकम टु द गुरुप।
सामन्तीको खासै परिभाषा थाहा नभए पनि, अरुलाई हेप्ने, दबोच्ने, खिल्ली उडाउने, अपमान गर्ने, अरुको प्रभाव रहला कि भनेर जालफट्याइँ गर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। अरुमाथि थिचोमिचो गरेर आफू उँभो लाग्ने भनौँ न।
मधेश आन्दोलनमा लागेका युवाहरुमा (मैले देखेका) यी सबै गुणहरु छन।
हेप्ने काममा कोही भन्दा कोही कम छैन।
खिल्ली कसको कति उडाउँछन, टुइटर हेरे पुग्छ। फेसबुकतिर झन उग्रपात छ रे।
अपमान गर्नेलाई जसरी बुझे पनि हुन्छ, तर खासगरी आफ्नो विचार नमिल्नेको व्यक्तिगत रुपमा खिल्ली उडाइन्छ।
उँभो लागेकै छन। नत्र डिजिटल मिडियामा उपस्थिति कसरी हुन्थ्यो होला। थिचोमिचो गरे कि गरेनन्, थाहा भएन।
अरु पनि छन केही, तर धेरै बकबक गरिरहन मन छैन यहाँ।
माथिका ५ बुँदा पहाडे टुइटर प्रयोगकर्ताहरुमा नि उत्तिकै छ। बढ्ता होला, तर कम छैन। किनकि म पनि यिनैमध्ये एक हुँ।
भन्नाले, गुमा बस्ने हरियो झिँगाले गुमा खेलेको देखेर मौरी पनि खेल्न जान्छ भने त्यो मौरी भलै मौरी नै किन नहोस्, तर गन्हाउन चैँ गु जस्तै गनाउँछ।
ओ बाइ द वे, हामी पहाडे सामन्तीले दलितहरुलाई मात्र मन्दिरमा रोकटोक लगाउँथ्यौँ। हामीबाटै सिकेर होला, विधवालाई पनि लिस्टमा थप्नु भएछ। बहुत खुब। क्याबात।
त्यसैले त वान्स मोर, वेलकम टु द गुरुप, सामन्ती मधेशी बोरोज।
सबै सामन्ती बनौँ, गरीबलाई मर्न र मार्न सडका उतारौँ। यसो गरेर हाम्रो यात्रा सँगै अघि बढाऔँ। भविष्य झाँटसिती।
← इपिक यान्ड अवोसम गोसाइँकुण्ड ट्रेक
Far Cry4– नेपाली परिवेशमा आधारित भिडियो गेम →